မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးအတွက်သတင်းကောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ ကျုပ်တို့ပုံစံအသစ်ကိုယ်ဟန်အနေအထားပြင်ပေးမှုပုံစံ - အသစ်ကိုယ်ဟန်အနေအထားပြင်ဆင်သူနှစ် ဦး တီထွင်ခဲ့သည်။ အဖြစ်သင့်ရည်ညွှန်းမှုအတွက်ရုပ်ပုံများ,
INTELLIGENCE - အချိန်နှင့်တပြေးညီကိုယ်ဟန်အနေအထားစောင့်ကြည့်ခြင်း။ သင်၏နောက်ကျောသည် ၂၅ ဒီဂရီကျော်ကွေးနေလျှင်၎င်းသည်သင့်ကိုဖြောင့်မတ်စွာထားရန်တုန်ခါမှုသတိပေးချက်ဖြင့်သင်၏ကိုယ်ဟန်အနေအထားကိုပြုပြင်ပေးလိမ့်မည်။
INGENIOUS DESIGN shaped ၈ ပုံစံဒီဇိုင်းသည်သာမန်စီးပွားရေးဖြစ်သည်။ ဝတ်ဆင်သည့်အခါ၎င်းသည်လူ့ကွေးနှင့်ကိုက်ညီသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားသောရော်ဘာပစ္စည်းသည်အလွန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်ပြီးသင့်ကိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေသည်။ သင်ဝတ်ဆင်သည့်အခါသင့်ပခုံးပေါ်မသက်မသာဖိအားမခံစားရပါ။
သိပ္ပံနည်းကျမှန်ကန်မှု - ၎င်းကိုတစ်နေ့လျှင် ၂ နာရီအသုံးပြုပြီး ၃ ပတ်အကြာတွင်အသုံးပြုပါကသိသာသောပြောင်းလဲမှုများကိုသင်ခံစားရနိုင်သည်။ နောက်ကျောကြွက်သားများသည်ကြွက်သားမှတ်ဥာဏ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးအကျင့်ဆိုးများကိုပြောင်းလဲစေသည်။
ENDURANCE - ၁ နာရီဓာတ်အားသွင်းပြီး ၁၅ ရက်အသုံးပြုပါ။ 500mA ပမာဏကြီးမားသောဘက်ထရီကိုကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင့်ကိုယ်ဟန်အနေအထားကိုရှည်လျားသောသက်တမ်းကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တည့်မတ်ပေးပြီးထပ်မံပြုပြင်ရန်မလိုအပ်ပါ။
၂။ နေရာအနှံ့ကိုယ်ဟန်အနေအထားစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ကြွက်သားမှတ်ဥာဏ်ကိုလေ့ကျင့်ပါ။
3. နောက်ကျောခလုတ်ကိုအလွယ်တကူလက်လှမ်းမီနိုင်သည်။ အရွယ်ရောက်သူများနှင့်ကလေးများပါ၎င်းကိုအလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်သည်။
အခါသမယ: အလုပ်၊ လေ့လာမှု၊ ခွေးလမ်းလျှောက်ခြင်း၊
၂။ ဝတ်ဆင်ပြီးနောက်နောက်ကျောကိုစိုက်ထူပြီးရင်ဘတ်ကိုချီပါ။ ထို့နောက်သတိပေးချက်ပေါ်ပါဝါခလုတ်ကို ၁ စက္ကန့်ကြာအောင်ကိုင်ထားပါကသတိပေးမှုသည် ၃ ကြိမ်တုန်ခါလိမ့်မည်။
4. တချိန်တည်းတွင်， သတိပေးချက်သည်သင်၏မှန်ကန်သောကိုယ်ဟန်အနေအထားကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
Radian ၌ ၂၅ ဒီဂရီကျော်ကျော်သော Hunchback ရှိပါက ure ကိုယ်ဟန်အနေအထားသတိပေးချက်သည်၎င်းကိုအလိုအလျောက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီးသတိပေးရန်တုန်ခါမှုကိုလွှတ်ပေးလိမ့်မည်။
အရွယ်အစား - တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအဆင်သင့်ဖြစ်စေရန်၊ ပစ္စည်း - ABS + မြင့်မားသော elastic နိုင်လွန်ခါးပတ်။
အလေးချိန် - ၈၅ ဂရမ်၊ လုပ်ဆောင်ချက် - ကျောရိုးကိုပြုပြင်ခြင်း၊ တိုးတက်ကောင်းမွန်သောဟပ်ခ်ျခ်ျ၊ အမြင်အာရုံကာကွယ်မှု၊ ဘက်ထရီစွမ်းရည် - ၅၀၀ mAH / 3.7v၊ အားသွင်းအင်တာဖီ:
standard V8 USB interface၊ သက်ဆိုင်သောလူများ - ကလေးများ / လူကြီးများအားလုံးနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေခြင်း၊ ပါဝါထောက်ပံ့မှု - ၅v၊ ပါဝါစားသုံးမှု - 0.4W၊ အားသွင်းချိန် - ခန့်မှန်းခြေ ၂ နာရီ၊ အားသွင်းဗို့အား - 5v